တောက်ပတဲ့အပြုံးတွေနဲ့ ပရိသတ်ကိုဖမ်းစားခဲ့ပြန်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး Park Bo Young - Cele Gabar
တောက်ပတဲ့အပြုံးတွေနဲ့ ပရိသတ်ကိုဖမ်းစားခဲ့ပြန်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး Park Bo Young
By NoiPosted on April 28, 2022
အပြုံးချိုချိုလေးတွေနဲ့ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသမီးချောလေး Park Bo Young ကတော့ပရိသတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ သူကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲများစွာမှာပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့သူဖြစ်ပြီး Strong Woman Do Bong Soon ဇာတ်ကားနဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ပရိသတ်တွေကြားမှာ ကျော်ကြားသူတစ်ယောက်ပါ။နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ Doom at Your Service ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေက အနုပညာခြေလှမ်းအသစ်ကိုစောင့်မျှော်နေကြတာပါ။
မင်းသမီးချောလေးကတော့ tvN ရဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ‘Yoo Quiz On The Block’ ရဲ့ရိုက်ကွင်းကနေပြီးတော့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ အင်စတာဂရမ်မှာ “I am Ms. Jagi-nim. Yoo Quiz” လို့ရေးသားပြီး ပုံ(၃)ပုံကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ အဖြူရောင်အကျီင်္ပေါ်မှာအနက်ရောင်ပိုကာဒေါ့တွေပါဝင်တဲ့ဝတ်စုံလေးကိုဝတ်ဆင်ထားပြီး ရင်သပ်ရှုမောစရာရှုခင်းကိုနောက်ခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ “Jagi-nim” ကတော့ ပွဲမှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရည်ညွှန်းရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စကားလုံးလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာလှုပ်ရှားမှုအသစ်တွေကို ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်နေဆဲမှာပဲ Park Bo Young ကတော့ ချစ်စရာအပြုံးလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အသည်းကိုခြွေသွားခဲ့ပါပြီ။ သူကတော့ ဧပြီလ (၂၇)ရက်နေ့မှာလွှင့်မယ့် ‘Yoo Quiz On The Block’ မှာ ဧည့်သည်အဖြစ်ပါဝင်ထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ေတာက္ပတဲ့အၿပဳံးေတြနဲ႔ ပရိသတ္ကိုဖမ္းစားခဲ့ျပန္တဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး Park Bo Young
အၿပဳံးခ်ိဳခ်ိဳေလးေတြနဲ႔ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ မင္းသမီးေခ်ာေလး Park Bo Young ကေတာ့ပရိသတ္ေတြနဲ႔ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။ သူကေတာ့ ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားစြာမွာပါဝင္ခဲ့ဖူးတဲ့သူျဖစ္ၿပီး Strong Woman Do Bong Soon ဇာတ္ကားနဲ႔ပရိသတ္ေတြနဲ႔ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ ေက်ာ္ၾကားသူတစ္ေယာက္ပါ။ေနာက္ဆုံးထြက္ရွိထားတဲ့ဇာတ္ကားကေတာ့ Doom at Your Service ျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ေတြက အႏုပညာေျခလွမ္းအသစ္ကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတာပါ။
မင္းသမီးေခ်ာေလးကေတာ့ tvN ရဲ႕ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ‘Yoo Quiz On The Block’ ရဲ႕႐ိုက္ကြင္းကေနၿပီးေတာ့ ခ်စ္စရာပုံရိပ္ေလးေတြကို မွ်ေဝခဲ့ပါတယ္။ သူကေတာ့ အင္စတာဂရမ္မွာ “I am Ms. Jagi-nim. Yoo Quiz” လို႔ေရးသားၿပီး ပုံ(၃)ပုံကို မွ်ေဝခဲ့ပါတယ္။ အျဖဴေရာင္အက်ီေပၤၚမွာအနက္ေရာင္ပိုကာေဒါ့ေတြပါဝင္တဲ့ဝတ္စုံေလးကိုဝတ္ဆင္ထားၿပီး ရင္သပ္ရႈေမာစရာရႈခင္းကိုေနာက္ခံျပီး ရိုက္ကူးထားတဲ့ပံုရိပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ “Jagi-nim” ကေတာ့ ပြဲမွာတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ရည္ၫႊန္းရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ စကားလုံးေလးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈအသစ္ေတြကို ပရိသတ္ေတြေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲမွာပဲ Park Bo Young ကေတာ့ ခ်စ္စရာအၿပဳံးေလးနဲ႔ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အသည္းကိုေႁခြသြားခဲ့ပါၿပီ။ သူကေတာ့ ဧၿပီလ (၂၇)ရက္ေန႔မွာလႊင့္မယ့္ ‘Yoo Quiz On The Block’ မွာ ဧည့္သည္အျဖစ္ပါဝင္ထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
Posted in International CeleTagged International Cele, Korean Actress, Park Bo Young
Previous post စိတ်ဝင်စားစရာပိုစတာအသစ်နဲ့အတူ ဇာတ်ကားသစ်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Seo Ye Ji
Next post ” လွန်ခဲ့တဲ့၆နှစ်က သူငယ်ချင်းဖြစ်သူအူဝဲနဲ့သူမရဲ့သားလေးတို့အတူရိုက်ကူးထားတဲ့အမှတ်ပုံရိပ်လေးကို ​တင်လာခဲ့တဲ့ချောရတနာ”